Sawiro: Wadooyinka Xamar saakey waa ku baaashaal! - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Wadooyinka Xamar saakey waa ku baaashaal!
Sawiro: Wadooyinka Xamar saakey waa ku baaashaal!
Waxaa ka mid ahaa dad sida weyn ugu dhib qabey xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho, waayo waxaa ka soo gudbaa saddex Jidgooyo oo kala ah warshadaha, Wadnaha iyo Makka Almukarama hase yeeshee Shaley iyo Maanta waxay ahaayeen Wadooyinka Magaalada Muqdisho oo Waxaa moodaa in uu Dhamaadey Ereygii Kala wareeg oo maalmahaan Magaalada aad ugu soo batey.
Sidoo kale Saakey Quraacdii waxaa la ii keeney Khudaar aan mudooyinka aan Cunin markii aan weydiiyey Saaxiibtey waxay tiri “Wadooyinkii baa la furey marka waxaana Magaalada soo galey Gawaari fara badan oo sida Khudaar waxaa ka sii daran Khudaarta aad bey u jabtey Nus Doolar baad ku xaabsaneysaa intaas oo Khudaar kala duwan.“